UNICEF ayaa sheegtay in 1 ka mid ah 4 tii caruur ee wadanka Ci... | Universal Somali TV
UNICEF ayaa sheegtay in 1 ka mid ah 4 tii caruur ee wadanka Ciraaq ay ku noolyihiin noolal faqri ah iyada oo Maraykanku diidday inuu siiyo wax gargaar ah.
Hay'adda Qaramada Midoobay ee carruurta ayaa sheegtay in mid ka mid ah afartii carruur ahba wadanka Ciraaq ay ku jiraan noolal faqri ah, oo ay u baahanyihiin gargaar degdeg ah oo caalami ah si looga caawiyo dib u dhiska ka dib afar sano oo dagaal ah oo looga soo horjeedo kooxda argagixisada ee Daacish.
UNICEF ayaa warbixinteeda ku sheegtay Axaddii, iyada oo intaa ku dartay in kala bar ka mid ah dugsiyada Ciraaq ay u baahan yihiin dayactir iyo in ka badan saddex milyan oo caruur ah ayaa waxbarashadoodu kala go'day.
"Carruurtu waa mustaqbalka Ciraaq," ayuu yiri Geert Cappelaere, oo ah agaasimaha gobolka ee UNICEF ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika.
Daacish ayaa ka billowday ololaheeda argagixisada oo dhiig badan ku daaday dalka Carabta sanadkii 2014-kii. Waxayna mudo kooban ku qabsadeen dhul ballaaran weerarada isdabajooga ahaa.
Raiisal Wasaaraha Ciraaq Haider al-Abadi ayaa ku dhawaaqay guushii ay ka gaareen kooxda bishii December ka dib markii ciidamada iyo xulafadooda ay dib u qabsadeen magaalooyinka ugu dambeeyay ee galbeedka Ciraaq.
Dawlada Ciraaq ayaa dalbanaysa $ 100 bilyan oo doolar oo maalgashi shisheeye ah oo ku aaddan gaadiidka, tamarta, iyo beeraha taasoo qayb ka ah qorshe dib loogu dhisayo qaybo ka mid ah waddanka iyo soo kabashada dhaqaalaha.
Kan-xigaKow iyo toban ergo oo ugu baaqay hoga...
Kan-horeMasar oo sheegtay inay dishay 16 ka m...
41,765,402 unique visits